घटना र प्रवृत्ति Archives - मूल्याङ्कन अनलाइन
अार्थिक सहयाेग जुटे बाँच्न सक्छन् कृष्ण केसी
प्युठान नगरपालिका वडा नम्वर ९ निवासी कृष्ण केसी मृत्यु र जीवन दाेसाँधमा अस्पतालकाे शय्यामा छन् । केसीकाे घरमा हरिविजाेग छ । सुन्दा पनि शरीर काम्ने र डरलाग्दाे दर्दनाक घटनाले कृष्ण केसीकाे परिवार पीडित छ । २०७३ सालकाे तिहारमा सबैले टीका लगाउँदै रमाउँदै गर्दा केसीकाे भाइ २५ वर्षीय कुल वहादुर केसी (फुर्से) काे तिहारकै दिनमा असामान्य रूपमा मृत्यु भयाे । बुबा, अामा, श्रीमती अनि छाेराहरूकाे अाम्दानीकाे स्राेतमा ठूलै धक्का पुग्याे । त्यसको १ वर्ष नबित्दै २०७४ सालकाे स्थानीय तहकाे निर्वाचनकाे चलपहल तीव्र गतिमा बढेकाे बेला केसीकाे परिवारकाे मूल खाँबाे अथवा बुबा डिमबहादुर केसीकाे जेष्ठ २८ गते घरमै दुर्घनामा परी मुत्यु भयाेपूरा पढ्नुहोस्
फागुन ६, जाजरकोट नलगाड नगरपालिका–८ की कैसी खत्रीलाई सुत्केरी बेथा लागेपछि गोठमा सारियो । गोबरको गन्ध र फोहोर खपेर उनी सुत्केरी भइन् । न न्यानो कपडा, न सफा ओछ्यान ।पूरा पढ्नुहोस्
असोज ३१, काठमाडौँ देउवा सरकारले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मन्त्रीहरु हटाउने चर्चा चलेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. किरण रेग्मी स्वास्थ्य मन्त्री गिरीराज मणि पोखरेलको सम्पर्कबाट टाढा छिन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकोपूरा पढ्नुहोस्
भदौ २९, इलाम । मादक पदार्थ सेवन गरी विद्यालय आएको आरोपमा एक प्रधानाध्यापकलाई प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको छ । रोङ गाउँपालिका–६ सलकपुरस्थित मोतीराम माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक लालबहादुर श्रेष्ठलाई जिर्मलेपूरा पढ्नुहोस्
भदौ २१, काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले यही भदौ २३ सम्म चर्चित रियालिटी शो ‘नेपाल आइडल’को भोट गणना नगर्न अल्पकालीन आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश विभाकर भट्टकोपूरा पढ्नुहोस्
भदौ १५, बेनी (म्याग्दी) । क्षेत्र नं. ४ अन्तर्गतको पहाडी जिल्ला म्याग्दीको समग्र विकास र जनचेतना विस्तारमा यहाँ सञ्चालित सञ्चार माध्यम प्रभावकारी र परिणाममुखी बन्दै गएका छन् । सञ्चार माध्यमकोपूरा पढ्नुहोस्
भदौ १४, टोकियो (जापान) । सुदुरपश्चिमेली समाजको लोकप्रिय देउडा भाकालाई रमाइलो लागेकै भरमा पिटेको ताली नै निर्णायक भएपछि दर्शक खुशी भए । मन परेको मान्छेलाई गरिएको प्रेम प्रस्ताव सहजै स्वीकारेरपूरा पढ्नुहोस्
रमेश गिरी साउन २, भक्तपुर । बाबुआमाको कलेजोको टुक्रा हुन् छोराछोरी, छोराछोरीको कलेजोका टुक्रा हुन् बाबुआमा भन्ने भनाइलाई काठमाडौँ महानगरपालिका–१२, लगनटोलकी २४ वर्षीया सरिता महर्जनले शाब्दिक रुपमै चरितार्थ पारेकी छन्पूरा पढ्नुहोस्
अच्युत रेग्मी असार २१, काठमाडौँ । ट्राफिक प्रहरीले निर्बाह गर्नुपर्ने दायित्व धेरै छ, तर पर्याप्त जनशक्तिको अभावमा सबै दायित्व पूरा गर्न कठिन भएको छ । निर्धारित भन्दा बढी भाडा लिएको,पूरा पढ्नुहोस्
किरण भट्टराई असार २१, काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा केही भइहाले आफू र घरपरिवारले राहत पाउने आशासहित कामदार विदेश जानुअघि जीवन बीमा र कामदार कल्याणकारी कोषमा रकम तिरेर जाने गर्छन्पूरा पढ्नुहोस्